कोरोना कहरमै जुम्लाका किसानलाई धान काट्न भ्याइ नभ्याइ - Fewa Nepal
पत्रकार ऋषि धमला कोरोना पोजिटिभ
फेसबुक चलाउँदा गल्ती गर्न नहुने के-के हुन थाहा पाउनुहोस् ।
अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिका लागि जो बाइडेन विजयी
नेपालमा कोरोनामुक्त हुनेको दर ८१ प्रतिशत पुग्यो
टेलिभिजन कार्यक्रमको छायांकनका क्रममा मुख्यमन्त्री शाही घोडाबाट लडेर घाइते
अघिल्लो बर्षको भन्दा यो वर्ष छिटो जाडो सुरु
रुघाखोकी होकी कोरोना थाहा पाउनुहोस छुट्याउँने तरिका
परदेशी लाई रुवाउने दशैको गित नमाने पिर सार्बजनिक
विजयादशमीका दिन आगलागी हुँदा पाँच घर जलेर नष्ट
के उडुसले तपाईलाई उठिबास लगायो ? चिन्ता नमान्नुहोस् !
कुखुराको भालेले एक महिलाको ज्यान लियो
भविष्य अनिश्चित छ, मृत्यु निश्चित छ र अहंकार व्यर्थ छ
गुर्जो कति खाने, कसरी खाने ?
राष्ट्रपति भण्डारीले आमाबाट टीका ग्रहण
कोरोना कहरमै जुम्लाका किसानलाई धान काट्न भ्याइ नभ्याइ
कालीमार्सी धान चामलको भात रातो चामल
खलङ्गा । जुम्लाका किसानलाई कालीमार्सी धान काट्न चटारो भएको छ । यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका खेतका फाँटमा सो जातको धान उत्पादन हुन्छ । धान पाक्न थालेपछि किसानलाई कोरोना कहरमै धान काट्न भ्याइ नभ्याइ भएको किसान लक्ष्मी कुमाइले बताइन् ।
सबै खेतको धान यो याममा पाकेर खेतमा झुल्न थालेको किसान बताउँछन् । किसानहरुले गत वर्षभन्दा यसवर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने जनाएका छन् । यतिखेर पाक्न थालेको मार्सी धान असोजमै काट्ने थालेको चन्दननाथ नगरपालिकाका रमानन्द आर्यालले जानकारी दिए ।
जिल्लामा दुई हजार ८०० हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको कालीमार्सी जातको धान यसको स्वाद, रोग र किराको प्रतिरोध गर्न सक्ने गुण र पोषक तत्वका कारण जुम्ली मार्सी धानको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म नै पुगेको छ । राणा शासनको समयमा केन्द्रमा रहेका शासकका लागि यही मार्सी धानको चामल हुलाकबाट काठमाडौँसम्म पु¥याउने गरेको यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरु बताउँछन् ।
करिब ७०० वर्षअघि जुम्लीहरुका इष्ट देवता चन्दननाथले भारतको कास्मिरबाट मार्सी धानको बीउ ल्याएको विश्वास गरिन्छ । यसको सक्कली बीउ अनुसन्धानका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा राखिए पनि अन्यत्र हराइसकेको छ । मार्सी विश्वको अग्लो स्थानमा फल्ने धानको रूपमा लिइन्छ । कृषि विज्ञहरुका अनुसार चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने खाद्यान्न र फलफूल निकै स्वादिलो हुन्छन् । त्यसैले जुम्लालगायत हिमालको तल्लो भेग र उच्च पहाडमा फल्ने मार्सी धानको भात निकै मिठो र स्वादिलो हुन्छ । यसको चामलको भात खाँदा धेरै बेरसम्म भोक लाग्दैन । स्वादिलो, आडिलो र स्वस्थकर हुन्छ । मार्सी धानको चामल खैरो रङ्गको हुन्छ ।
खैरो देखिने भएकाले कसैकसैले यसलाई रातो चामल पनि भन्छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतका बिरामीलाई यो चामलको भातले निकै फाइदा हुने भएकाले शहरमा यसको माग पनि बढी नै हुने गरेको छ । यो चामलको माग शहरबाट बर्सेनि बढेर आएका यहाँका किसान बताउँछन् । रासस
पछिल्लो समय खेती गर्न गोरुको अभाव
भारतीय सेनाध्यक्ष तीनदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता
दशैंँ मनाउन घरमा आएका लागुऔषध मुद्दाका एक प्रतिवादी पक्राउ
द्वारा संचालित नेपालीमा प्रकाशित हुने डिजिटल अनलाइन पत्रिका हो । हाल यस साइट परिक्षणको क्रममा रहेको छ । सम्बन्धित निकायबाट अनुमती लिए पश्चात हामी यहाहरुलाई हलपल ताजा समाचार उपलब्ध गराउने छौ ।
सह-सम्पादक : कृष्ण किसान संयोग
डेक्स सम्पादक : शिव परियार
Tweets by efewanepal
© 2020: Fewa Nepal मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा